XEERARKA BEERITAANKA IYO KORITAANKA HARAMAHA BAALDIGA - BOW
Shallots waa wakiilka ugu faa'iido badan ee basasha, sidaas ma aha la yaab leh in dalagga this si aad u caan ah ee guriga iyo ganacsiga qudaarta sii kordhaya. Badanaa, xididada waxaa lagu koray baalasha si ay u helaan cagaarka fitamiinka. Shallot waxay leedahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah oo ku saabsan basasha: riwaayadda, dhalidda sare, iska caabida qabow iyo caabbinta barafka, taas oo kuu ogolaaneysa inaad hesho waxtarro badan oo hore.
Caleenta ee basasha this ku dhowaad ma toogtaan, laakiin inta lagu guda jiro sii kordhaya ma koraan kari weyn iyo muddo dheer sii hayso dhadhan iyo guryaha nafaqada. Iyada oo isticmaalka waxooga yar ee wax lagu beero, goosashada cagaaran ee geedaha waa dhowr jeer ka weyn tahay cadadka cagaarka ee basasha.
Sida laga soo xigtay sharaxaad, riwaayadaha waxay u eg yihiin basasha caadiga ah, laakiin gudaha madaxa waxay ka kooban tahay xaleef basal badan. Shallot - wakiil ka mid ah qoyska basasha, ayaa leh noocyada soo socda: Deenishka, Ruushka (abuurka) iyo baradhada.
Iyadoo ku xiran nooca guluubka canojta ah ee wareegsan, wareegga wareegga wareegga ama wareegga wareegga. Nalalka waxay ku xiran yihiin "cirfiidka" (hoose) ee guluubka hooyada, sababta oo ah, waxay mararka qaarkood leeyihiin qaab calaamad ah.
Buulasha ku dhow agagaarka geedaha, 6 ilaa 12 nalal ayaa la sameeyay, iyo qaar ka mid ah noocyada beeraha xitaa 25-40, halkan magaca caanka ah ee warshadda "afartan ilig." Iyadoo ku xiran nooca roodhida, midabka qallalan ee qalalan ayaa ku kala duwan caddaan, iftiin hurdi ah, bunni, casaan ilaa lilac. Khudradda casiir ee casriga ah sidoo kale waxay noqon kartaa caddaan, cagaaran ama lilac iftiin leh. Shallot waxaa ku jira badanaa ascorbic acid, iyo sidoo kale saliidaha lagama maarmaanka ah, fiitamiinada iyo macdanta. Hoos waxaa ku xusan in aan tixgelinno marxaladaha ugu muhiimsan iyo talooyinka ku saabsan sida loo koro khudradda cagaarka., si aad u hesho goosashada oo hodan iyo caafimaad leh.
Xagaaga xagaaga, waxaad sidoo kale ku kobcin kartaa noocyada basasha sida dhirta, Hindiya, lakulanka, batun, shnitt.
Doorashada goobta iyo ciidda loogu talagalay geedo beerto
Kobcinta qashinka ee cagaarka bannaanka u furan waxay ku xiran tahay dhowr waxyaalood oo ah talooyin sahlan. Waa dhaqan qurux leh, oo qorraxdu ka samaysan tahay rosette caleemaha cagaaran, sidaas darteed waxay u baahan tahay meel furan oo furan, iyo sidoo kale dhul ballaadhan oo aad u ballaaran oo ka badan qaanso joogta ah.
Ciidda ugu fiican waa qoyan, dhexdhexaad ah ama waxoogaa acidic ah, humus-bacli ah, iyo sidoo kale loamy humus iftiin. Shallot si fiican u kora on carrada bacrin ah, sidaas compost sariiraha waa in aan la reebay. Ka hor inta beerto geedo baaluq ah, waxay diyaariyaan ciidda xilliga dayrta: 1 mitir oo laba jibbaaran. m dhulku wuxuu ku biiraa 2-3 baaldiyo oo ah compost, digada cagaarka ah ama humus lagu qasi jiray superphosphate iyo potassium sulfate, 70 g mid kasta.
Si loo hagaajiyo ciidda ka hor qalliinka phagelia waxaa lagu beerayaa karaa. Waxay ku kori doontaa dhaxan iyo cagaarka ayaa ku socon doona barafka. Guga, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la qodo sariirta, phacelia seeding dhulka, iyo dhirta dhirta dhammaadka bisha Abriil.
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo jarjaraha infekshanka iyo cayayaanka, codso dalagyada dalagga ama dalagga beeraha ee hal meel. Si looga hortago faafidda duqsashada basasha, waxay ku talinayaan in lagu beero dabacasaha.
Nalalka yaryar, qiyaastii 3 cm dhexroor, waxay ku fiican yihiin beeritaanka. Waxay laanta si fiican u sameeyaan, waxay sameeyaan basasha la raaco. Madaxda yar yar ee basasha ayaa loo isticmaalaa inta lagu jiro beeritaanka dayrta si loogu qasbo qalinka.
Nalalka waaweyni waa kuwo aan habooneyn in la isticmaalo, sababtoo ah waxay bixiyaan tiro badan oo nalalka yaryar iyo yaryar yar.
Ka hor intaan la beeriin, alaab beerto waa in lagu diyaariyaa adigoo haysta nalalka xalka qaliinka (4 dhibcood halkii 100 ml oo biyo ah) ilaa shan saacadood. Waxa kale oo suurtagal ah in la isticmaalo xal xabbad-dhejis ah sida kicis kaas oo nalalka lagu hayo 15-30 daqiiqadood. Xaaladdan oo kale, qaybta adag ee hoose (cawska) waa in la googooyaa xididada cusub. Haddii wax lagu beero ayaa lagu keydiyay hab qabow, markaa waxaad u baahan tahay inaad qabato toddobaadkii heerkul ah +30 digrii.
Ma taqaanaa? Shallots ayaa leh magacyo badan: afartan-baraf, shalotka, charlotte, bushwood, baadiyaha. Magaca latin ee geedka: allium ascalonicum, oo laga helo magaalada Ascalon (Falastiin). Waddada dhuleed - Dhulka Aasiyada Yar. Qodobka ugu horreeya ee warshadani waxay dib udhigi doontaa 1261 sanadood. Maanta geedka waxaa lagu beeray dalka Masar, Hindiya, Giriiga iyo wadamada yurub. Ugu horreyn qiimaha alaabooyinka dawooyinka, ee loo isticmaalo cudurrada indhaha iyo cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka.
Qorshaha basasha beerto ee baalasha
Shallots waxaa la beeray guga hore ama dayrta ka hor xilliga qaboobaha.
Wixii beerta geedo ee jiilaalka waxay isticmaalaan basasha yaryar, in ka yar 3 cm dhexroor, way ka badan yihiin jiilaalka-adag. Waxaa lagama maarmaan ah in la beero bil bil iyo badh ka hor bilawga ah ee baraf ugu horeysay, sidaa daraadeed waa in xididku xidid ka qaadi karaa, laakiin ma bilaabayo inuu koro. Dhanka koonfurta waddanka, tanina waa qiyaastii bilowga iyo bartamaha bisha Oktoobar. Basasha waxaa lagu beeray dhulka qoyan ee saf, adigoo haysanaya masaafada 30 cm u dhexeeya. Masaafada u dhaxaysa dhirta waa inay ahaataa ugu yaraan 10 cm.
Nalalka waxaa lagu aasi karaa 10 cm ama 3 cm ka sareeya dusha ciidda. Ka dib markii laga beerto, mulch-daboolka leh humus ama peat, lakabka ah 3-4 cm, kaas oo laga saaray guga.
Badanaa waxaa la beeray basasha xilliga jiilaalka ee waddanka koonfureed. Inkastoo xaqiiqda ah in warshadu caan ku tahay adkaysigeeda qabow ee sarreeya, waxay u adkeysan kartaa miraha ilaa 20 darajo waxayna xajistaa murgacashadeeda ka dib markii lagu keydiyo ka dib, hareeraha dhexe intii lagu jiray beeritaanka xilliga qaboobaha weli waxaa halis ugu jira in ka badan kala badh dalagga. Faa'iidada of beat dayrta beerto waa in formation of caleemo cagaaran ka badan marka markii la beeray guga hore. Caleemaha ayaa isla markiiba soo muuqda ka dib barafka, cagaarka ayaa horay u soo baxa.
Guga, marka khatarta ah ee barafku soo maray, waxaad dhali kartaa geedaha cagaarka. Tani inta badan waa dhammaadka Abriil - bilowga Maajo. Bacriminta Nitrogan waxaa lagu dhaqmaa ka hor inta beerto - 25 g halkii 1 sq. M. Nalalka waxaa lagu meeleeyay qoyaan, diyaariyey ciid beertii si qoto dheer ah 12 cm, oo u fiirsashada masaafada u dhaxaysa saf 30 cm, iyo inta u dhexeysa geedo - qiyaastii 15 cm.
Hal mitir oo laba jibbaaran waa inay ahaataa 30 nalal oo qiyaastii isku mid ah. Haddii loo baahdo, beeritaanka waraabiyo iyo mulched leh peat ama humus. Si looga fogaado marksmanship, waaot waxaa lagu daboolay lutrasil. Sida ugu dhakhsaha badan cagaarka ayaa u muuqda, hoyga ayaa la saaraa si caleemaha uuna u bareerin.
Daryeelka sariiraha dushiisa ee baalkaga cagaaran
Koritaanka geedaha waxaa ka mid ah hawlaha daryeelka ee soo socda: dhirta, dabacsanaanta ciidda iyo waraabinta. Meelaha kululaynta ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya bilowga xilliga koritaanka, xilliga qallalan, biyaha waa in la waraabiyaa ilaa saddex jeer, iyadoo la isticmaalayo 15-20 litir oo biyo ah halkii mitir labajibbaaran. Bil ka hor nadiifinta, waraabinta waa in la joojiyaa.
Haddii ciidda aysan ku kala duwaneyn bacriminta, ka dib koritaanka caleemaha, xididdo u baahan tahay in la quudiyo Bacriminta nitrogenous: Hagaha, shimbirta dhoobo, Doodwanaag: 1 baaldi xal oo ah 10 mitir oo laba jibbaaran. m dhulka.
Maadaama ay dalaggu beeranayo waqtiyo kala duwan, ma jiraan wax qaas ah oo la xidhiidha xilliga goosashada. Iyadoo aan loo eegin noocyada kala duwan ee jarjar ee lagu beeray boobka, waa in la saaraa marka cagaarku gaadhay heerkul dhan 30 cm. Inta lagu guda jiro beerashada guga waxay dhacdaa bisha Luulyo.
Isla marka aad ogaato in caleemaha hareeraha hagaagtay, ay caatoobaan, noqdaan kuwo khafiif ah oo u muuqda in dhulka, basasha u baahan yihiin in la isla markiiba nadiifiyo. Maadaama dhirku korayo sicirrada kala duwan, baaluqyada ayaa loo goynayaa si xushmad leh. Kaliya kuwa gaadhay dhererka la rabay waxay ku haboon yihiin, baaluqa sidaas oo kale ah waa mid xoogan, oo qaabeeya qaabkeeda, waa mid si fiican loo baakadeeyay oo loo qaadaa. Waxaa muhiim ah in aan la seegin waqtiga goosashada, maaddaama cagaarka uu noqon doono mid adag, jaale ah oo lumiya luminta iyo dhadhanka.